Magro Behoririka : vontosy mbs ny elankelan-trano – MyDago.com aime Madagascar
Niaina mivantana ny Mbs androany Sabotsy 08 Aprily 2017 ny vahoaka mpomba ny filoha Ravalomanana Marc teny amin’ny kianjan’ny Magro behoririka.Ny endrikendriky ny fandaharana nisy tao amin’izany Mbs izany no natao teny an-toerana toy ny fampahalalam-baovao. Ireo mpiasan’ny Mbs no nanentanana ny fotoana tamin’izany. Anisan’ny vahiny nasaina tao anatin’ny fampahalalam-baovao ny talen’ny famoahana ny Mbs Ralaivaohita Joel. Nambarany tamin’izany fa ny radio sy tele Mbs , na ho ela na ho haingana di atsy maintsy mandeha. Misy antony politika hoy no tsy mampandeha azy io.Tsy misy antony hahafahana manakana ny fisokafan’io satria ara-dalaàna tanteraka rah any lafiny lalàna. Nisy ny fitoriana nataon’ny Mbs tany amin’ny filankevi-panjakana ka tsy maintys miandry valiny avy any iiska.Notsiahiviny fa efa nisy ny fanomezana ireo zavatr aizay notakian’ny ministr ny serasera tamin’ny fotoan’androny ka efa nomena azy avokoa izany zavatra notakiana izany. Noho ny tsy fisian’ny fitaovana tao amin’ny Rnm sy Tvm hoy izy no nanomezana ny fitaovan’ny Mbs azy ireo tamin’ny taona 2009. Tamin’ny taona 2015 dia nanomboka niverina niasa ny Mbs saingy fotoana fohy taorian’izay dia nanjanony ny fanjakana tamin’ny alalan’ny fanelingelenana ny marindrefy”brouillage” izany. Ny fitondram-panjakana indray hoy Joel no mampiasa fomba tsy mendrika tahaka izany. Avelao ny fitsarana no hamaly na mandeha na tsy mandeha ny Mbs fa isika tsy miala na firy taona na firy taona ary tsy ho lany andro hamaly an’iza na iza. Na taiza na taiza teto ambon’ny tany hoy izy izay fitondrana manakantsakana ny fahalalana dia tsy maharitra.
Andriamatoa Raveloson Constant ihany koa dia anisan’ny vahiny nasaina tao anatin’ny fampahalalam-baovao tamin’ny Mbs antsehatra. Nambarany fa ny firenentsika hatramin’izao dia ohatra ilay ratsy fanahy no ambinina fa izay mitana ny marina mahatsiaro matiantoka. Lasa tany barofo ny tanindrazantsika, anjakan’ny tandapa mamba noana anjakan’ny mpitaty kitapo latsaka. Momba ny hoe misy ve ny fahalalana hiteny di anambarany fa misy ihany ny radio sy tele milaza zavatra fa tsy milaza lalina ny zavamisy, miampy ny internet ihany koa saingy tsy afaka manao inona, rah atsy hoe angaha ianao tandapa miara misalombokomanamamba noana. Rah aizay dia mhazo miteny izay tenenina ary manao izay tiana atao. Matoa isika eto dia tsy afaka miteny.Ity Mbs ity hoy Raveloson Constant dia nanhoizako ny fanaoko hatramin’izay, tamin’ny izaho mbola mpianatra ka ny vola azoko tamin’ny fianarako dia nividianako radio henoina vaovao. Ity Mbs ity no nahitako fa manome laka sy as any tanora. Momba ny fiatrehana ny ho avy dia nilaza ity mpanao politika ity fan a ny ho avintsika barofo .na misy barofo ny mpitondra na misy ihany koa ny mpanohitra barofo izay tsy mahazo olona tamin’ny famoriana olona ka hiditra amin’ny sehatra ara-dalàna. Ny tambanivohitr ahoy izy dia efa manomboka manohitra ny barofo atao aminy izay hakana ny fananany. Na manao fifidianana milamina, tsy fanjakana tandapa, izay no fitsinjovana ny ho avy. Ny ankoatra izay hoy Constant dia na isika 2009 mitohy na mbola tsy afaka miaina amin’ny tany demokratika.Na ny hoavintsika barofo eto eritrereto hoe tambanivohitra no sahy mananika zandary.Efa tena famoizampo izany. Rehefa tsy mandala ny tany tan-dalàna ny mpitondra dia tsy tan-dalaàna izany. Vontosy Mbs ny elankelan-trano. Ato anatin’ny herinandro hoy izy dia tohizantsika ny zavatra efa nantomboka.Misia ianareo ao amin’ny Mbs mandeha mankany amin’ny filankevi-panjakana sao hiampy herinandro eto indray. Ny sekretera jeneraly no mamoaka zana-dalàna ohatry ny hoe izy no mpitsara.Moa ve fanapahankevitra niarahana tamin’ny ministra izany ka hoe manaova ianareo raha sahy? Tokony hiteny ny filohampirenena hoy izy satria ao anatin’ny lalàmpanorenana dia misy hoe ny filohampirenena no miantoka ny fahaleovantenan’ny fitsarana. Nanentana ny vahoak aihany koa ny tenany hampiasa ny feonkira famantarana ny vaovao tao amin’ny Mbs mba ho atao feonkira amin’ny finday.
Nisokatra ny « MBS » : Magro Behoririka Serasera
MAGRO Behoririka : Tokony hifona ny frantsay
Auteur Solo Razafy*Publié le 8 avril 2017 8 avril 2017 Catégories Politique
Précédent Article précédent : Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MANDOTO NY ENDRIKY NY FIRENENA NY MPITONDRA ANKEHITRINY
Suivant Article suivant : TIM : HIJORO HO MPANOHITRA NY FITONDRANA